နီနေချိန်တွင် မနောကံမြောက်နေပါသည် ……… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » နီနေချိန်တွင် မနောကံမြောက်နေပါသည် ………
နီနေချိန်တွင် မနောကံမြောက်နေပါသည် ………
Posted by Khaing Khaing on May 30, 2012 in Creative Writing, Think Different | 78 comments
အခုရက်ပိုင်း ကျွန်မရွာထဲသိပ်မ၀င်ဖြစ်ဘူး …….. ရွာသူရွာသားသူငယ်ချင်းတွေက ဒါလေးဖတ်ကြည့် ဟိုဟာလေးကရီရတယ်ဆိုမှ ကျွန်မခဏ၀င်မန့်ဖြစ်တယ် ……….. ကျွန်မတို့ ရုံးကပြောင်းရွေ့တော့မှာရယ် လကုန်ခါနီးအလုပ်ကိစ္စလေးတွေရှုပ်နေတာရယ်ကြောင့် ရွာသူရွာသားတွေရဲ့ပို့စ်တွေကိုတွေ့ သော် ငြားဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခြင်းမပြုဖြစ်ဘူး ဒါပေမယ့် မထင်မှတ်ပဲ ရွာသူရွာသားထဲက တစ်ယောက် ကျွန်မကိုလာပြောတယ် ရွာထဲမှာစာသိပ်မရေးချင်တော့ဘူးတဲ့ ကျွန်မကိုလည်းမရေးဘူးလားလို့ မေးနေတယ် ကျွန်မကအချိန်မရှိလို့မရေးဖြစ်တာကိုပြန်ပြောတော့ သူကတော့ “ရွာထဲမှာ အနီလုပ်နေတဲ့ အုပ်စုရှိတယ်တဲ့” ကျွန်မလည်းမနေ့ကတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကျွန်မပို့စ်အဟောင်းတစ်ခု ကိုဝင်ကြည့်မိတယ် “ပန်း”ဆိုတဲ့ပို့စ်ပါ ကျွန်မအမျိုးသားကရုံးကိုလိုက်လာတယ်လေ သူ့ကိုကျွန်မတင်ထားတဲ့ပို့စ်လေးရယ် ကျွန်မရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလက်ရာလေးတွေကိုပြချင်လို့ ဖွင့်ကြည့်တော့ အရမ်းကိုအံ့သြသွားတယ် ပို့စ်တစ်ခုလုံးမှာ နီရဲ့နေတာပါပဲ ကျွန်မရဲ့ပို့စ်က မိုက်ရိုင်းတဲ့ပို့စ်တစ်ခုမဟုတ်တာတော့သေချာပါတယ် ပန်းလေးတွေပဲတင်ထားတာပါ အောက်ကမန့်ကြတဲ့ ရွာသူရွာသားတွေကလည်း ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးရေးထားတာပါ ဒါပေသည့်အနီတွေပေးထားတာ တော့်တော့်ကိုအံ့သြမိတယ် အနီပေးခြင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ကိုသေချာသိစေချင်တယ် ကျွန်မရွာထဲကိုဝင်တာ မည်သူကိုမျှအနီမပေးဖူးပါဘူး ကျွန်မရဲ့အနီအပေါ်ထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်က ရိုင်းစိုင်းစွာပြောဆိုတာတွေကိုပဲနီသင့်တယ်လို့ထင်တယ် ကျွန်မရဲ့ပို့စ်မှာ နီနေတာဟာ ကျွန်မကို (သို့မဟုတ်) ကော်မန့်ပေးသောရွာသူရွာသားတွေကို မုန်းတီးနေတယ် မကြိုက်နှစ်သက်ဘူးဆိုတဲ့ သဘောလိုသက်ရောက်နေတယ် ဒီလိုရွာသူရွာသားချင်းမနှစ်သက်မုန်းတီးနေရင် ရွာထဲကိုလည်းမ၀င်သင့်ဘူးလို့ထင်ပါတယ် ဒီရွာထဲမှာ ကျွန်မသိသလောက် အားလုံးနီးပါးဟာ ပညာတတ်ကြတယ် အလုပ်အကိုင်ကိုယ်စီရှိသလို အလုပ်အကိုင်တွေကလည်း အဆင့်အတန်းမြင့်ကြတာများပါတယ် ……ဒီလိုအဆင့်အတန်းရှိစွာရေးသားပြောဆိုနေသော ရွာသူရွာသားများကို နီနေတာဟာလည်း ထိုသူများရဲ့သိက္ခာကိုထိခိုက်စေပါတယ် နောက်တစ်ခုက အခုဓာတ်ပုံပြပွဲပို့စ်မှာပါ အဲဒီအထဲမှာလည်းနီထားကြတယ် ကိုအရင့်ရောင်ရဲ့ပို့စ်မှာလည်းနီထားတယ် နောက်တစ်ခုက ရွာသူရွာသားတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်သိပ်ခင်မင်မှန်းသိရင်လည်း အဲဒီလူနှစ်ဦးကို တစ်ဦးက အမြင်မကြည်ဘူး ဒီမန္တလေးဂေဇက်ဆိုဒ်ကိုမကြိုက်ရင်ဝင်မဖတ်ပါနှင့် ပြီးတော့ရွာသူရွာသားတစ်ယောက်ကို မကြိုက်နှစ်သက်ရင် အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပို့စ်ကိုဝင်မဖတ်ပါနှင့် ဒါပေသည့် ကိုယ်မကြိုက်နှစ်သက်သော်ငြားလည်း အခြားသူများက သဘောကျလို့ ၀င်ဖတ်ကော်မန့်ပေးထားတာကိုတော့ သဘောထားဆိုးစွာ ရင်ထဲကခံစားချက်ကိုဖွင့်မပြနိုင်စွာနှင့်နီပလိုက်တာ ပို့စ်ပိုင်ရှင်ရော ကောမန့်ပေးသူရောစိတ်ထဲမှာ မကောင်းဖြစ်နေတာအမှန်ပါပဲ ……… ကျွန်သိသလောက်ရွာထဲမှာ စကားလုံးအသုံးအနှုန်းရိုင်းစွာသုံးတတ်တာ (၃)ယောက်ပဲရှိပါတယ် ဥပမာ – ကိုဖုန်းကျော် (စိတ်မဆိုးပါနဲ့နော်) ကိုဖုန်းကျော်ပို့စ်တွေက စကားလုံးတွေကကျွန်မမကြိုက်ဘူး ကျွန်မမည်သည့်အခါမှ ၀င်လည်းမဖတ်သလို ဝေဖန်မှုလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူး နီဖို့ဆိုတာဝေးပါသေးတယ် ကိုဖုန်းကျော်ကိုယ်တိုင်ကလည်း သူ့ပို့စ်မှ လွဲပြီး အခြားပို့စ်တွေထဲတွင် ကော်မန့်ပေးတာနည်းသလောက်ရှားပါတယ် …. အမှန်ပြောရရင် ကိုဖုန်းကျော်တောင် စည်းကမ်းရှိတယ်လို့ ကျွန်မထင်တယ် …..
ကျွန်မထပ်ခါထပ်ခါပြောချင်တာက နီချင်ရင် မိုက်ရိုင်းစွာပြောထားသော စာသားများကိုသာနီ ပေးစေချင်ကြောင်း ကောင်းမွန်စွာရေးသားထားခြင်းကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာအမြင်မကြည်မှုနဲ့ အနီပေးရန်မသင့်ကြောင်း ထိုသို့လုပ်နေပါက ရွာသူရွာသားစာရေးစရာကောင်းများကို အနုနည်းနဲ့တိုက်ခိုက်နေသလိုဖြစ်ပြီး စာရေးဆရာကောင်းများဆုံးရှုံးနိုင်ကြောင်း မိမိနီတာကို အခြားလူမသိပေမယ့် မိမိရဲ့ကိုယ်စောင့်နတ်ကသိနေပြီး မိမိနီနေချိန်တွင် မိမိစိတ်ထဲတွင် မနေကံကိုကျူးလွန်မှန်းမသိကျူးလွန်ကာ အကုသိုလ်စိတ် ငရဲစိတ်ဝင်နေကြောင်း မိမိကိုယ်မိမိမသိဖြစ်နေသည်ကို ကျွန်မက နိဗ္ဗာန်အကျိုးမြော်ကိုးကာ ဒီပို့စ်လေးကို တင်ပြလိုက်ပါသည်ရှင် ………..
ရွာထဲမှာ အလကားနေရင်း နီနေတဲ့အဖြစ်တွေ အများကြီးပဲ တွေ့ရတယ် ..
ဘာလို့လဲ .. ဘယ်သူတွေ လာနီတာလည်း မသိပါဘူးဗျာ ..
ကျနော်အနေနဲ့ ပြောရရင် အနီပေးဖို့ဆိုတာ ဝေးလာဝေး …
မိုက်ရိုင်းတယ် ဆိုတဲ့ စကားတွေနဲ့ ကွန်မန့်ကိုတောင်မှ အနီ မပေးခဲ့ပါဘူး ..
အနီတွေ လွှမ်းနေတဲ့ ပို့စ်တစ်ခုဟာ ကြည့်မကောင်းတာတော့ အမှန်ပဲဗျ ..
အစိမ်းလေးတွေနဲ့မှ စိမ်းစိမ်းစိုစို ကြည့်သူ၊ ဖတ်သူကိုလည်း အမြင်အေးစေတယ် …
မခိုင်ပြောသလို အနီပေးတဲ့အချိန်မှာ မကောင်းတဲ့ မနောကံကို ကျူးလွန်နေတယ် ဆိုတာလည်း ထောက်ခံတယ်ဗျို့ ….
ဘယ်သူမှ မသိပေမယ့်၊ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တော့ သိနေတယ် ..
အဲဒီလို လူမျိုးတွေ ဘယ်တော့မှ ကိုယ့်လိပ်ပြာ ကိုယ်သန့်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး ..
ဒီလူတွေ သေရင် စိတ်မသန့်တဲ့အတွက် ကောင်းရာရောက်ဖို့ဆိုတာ ဝေလာဝေး …
ရှင်းရှင်းပြောရရင် … ဘာမဟုတ်လောက်တဲ့ အကုသိုလ်လေးနဲ့ အပါယ်သွားချင်တဲ့ လူတွေ …
ဒီလူတွေလောက် တုံးတဲ့၊ အတဲ့လူတွေ ရှိမှာတောင် မဟုတ်တော့ပါဘူး …
လူမိုက်သား ရမ်းကား၊ လူလိမ္မာသား ယဉ်ပါး ဆိုတာ ဒီလိုမျိုးတွေ ပြောတာနေမှာနော့ ..
ဒီလို ပြောတာကလည်း အနီပေးတဲ့ လူတွေကို အမြင်မကြည်လို့ မဟုတ်ပါဘူး ..
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျကျ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ မပါဘဲနဲ့
မနီသင့်တာကို မနီဖို့ … ပြောချင်တာပါပဲ …
အဲ … လေကြော ရှည်နေပါပြီ …
ကျနော် ပြောချင်တာတွေက ဒါပါပဲဗျာ …
ကိုကြီးအံရေ မအားတာအမှန်ပါ ကိုကြီးအံရဲ့ပို့စ်တွေကိုလည်းတွေ့နေပါတယ် ၀င်မဖတ်ဖြစ်ဘူး .. အခုဟာက ခဏလေးဝင်လိုက်တာ ၀င်သမျှပို့စ်ကနီနေတာတွေ့တော့ စိတ်မကောင်းဘူး ဒါကြောင့် တင်သင်မတင်သင့်မစဉ်းစားတော့ဘူး ရင်ထဲရှိတာကိုအမြန်လေး စာစီရေးတင်ပလိုက်တယ် ….. မနက်က ရွာသူ/သား တစ်ယောက်က နီတဲ့ကိစ္စကို တော်တော် ခံစားနေရတယ် သူ့ပြောတာကြောင့်လည်းပါပါတယ် သူ့စာတွေကိုလည်းဆက်အားပေးချင်တယ် ဒါကြောင့်ဒီပို့စ်လေးတင်ဖြစ်သွားတာပါ ……..
ကိုကြီးအံရေ လကုန်ကျရင် ပြောင်းလာတော့မှာနော် အိမ်လာလည်ဦး ………
လာရင်တော့ အချိန်ရွေးပြီးမှ လာလည်ရမယ် ..
ဝါးဒီးဖွင့်တဲ့ အချိန် …
လေးစားစရာကောင်း နေပြန်ပြီဗျာ။ ကျနော်လဲ ဒီကိစ္စကို သတိထားမိတာ ကြာပြီ။ တခါတလေဆို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ပြောထားတဲ့ စကားလေးတွေတောင် နီနေတာတွေ့တယ်။ သူများပြောရင် မကြိုက်ဖူး ကိုယ်ကိုတိုင်က စပြီးစောင်းပြောနေတာတွေလဲ ရှိတယ်။ မခိုင်ခိုင် ကျနော်ပြောတာကို ယုံပါ့မလားတော့ မသိဘူး။ ကျနော်က ကျနော်ရေးတဲ့ ကွန်မန့်တွေ ဘာတွေကို အစိမ်းတွေ ဘာတွေ ကိုယ့်ဘာသာ ဘယ်တော့မှ မပေးဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုယ်ရေးတာ ကောင်းလား မကောင်းလား ကိုယ်သိလို့ပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒီကိစ္စကို ရူးသွပ်သူတွေ ရှိတယ်ဗျ။ ဖြစ်နိုင်တာက ကိုယ်ရေးတာ ကိုယ့်ဘာသာ အစိမ်းပေးတာတို့။ ကိုယ်မတည့်တဲ့သူကို ဝေဖန်ရင် အကျိုးအကြောင်း မဆီလျော်လဲ အစိမ်းပေးတာတို့ပေါ့ဗျာ။
Ko San Hla Gyiရေ …. ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်အစိမ်းပေးတာတော့ညီမသိပ်မသိဘူး ညီမကတော့ ရွာမှာ ရာထူးရာခံသိပ်မရှိတော့ (Edit) ဆိုလားပဲ လုပ်လို့မရသေးဘူး …… ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်စိမ်းလို့လည်းမရသေးဘူး သူများတွေကိုပဲစိမ်း လို့ရသေးတယ် …….
Ko San ရေ ညီမကဒီပို့စ်တင်တာ ညီမရဲ့ခံစားချက်ထက် တစ်ခြားသော သူတွေရဲ့ခံစားချက်တွေ ကို ကိုယ်စားရေးမိတယ်ဆိုပိုမှန်ပါလိမ့်မယ် ……… ညီမကရွာထဲမှာ အကျိူးပြုစာပေတွေ အရေး အသားနည်းပါတယ် …….
“ ကျွန်သိသလောက်ရွာထဲမှာ စကားလုံးအသုံးအနှုန်းရိုင်းစွာသုံးတတ်တာ (၃)ယောက်ပဲရှိပါတယ် ”
အနီပေးတဲ့ ကိတ်စကတော့ ပြောရခက်တယ် ။ ရက်ဂျစ်စတာမလုပ်ထားဘဲ နေ့ စဉ် စာဝင်ဖတ်တဲ့ လူတွေ လဲ အများကြီး ရှိတာဆိုတော့ ၊ အတိအကျ ပြောဖို့ မလွယ်ပါဘူး ။ သို့ ပေသည့် ရွာထဲက တစ်ယောက်ယောက်လို့ ရယ်တော့ ပြောလို့ ရကောင်း ရနိုင်ပါတယ် ။ ဥပမာ ကိုပေါက် မန်းတလေး ပို့ စ်တွေ ဆိုရင် ကြည့်လိုက်ရင် အမြဲတမ်းနီနေတယ် ။
ကိုပေရေ ….. ရိုင်းစွာသုံးတတ်တဲ့ (၃) ယောက်က တစ်ကယ်တန်းလူမြင်မှာသာရိုင်းတာပါ သူတို့ စိတ်ဓာတ်ကကောင်းပါတယ် သူတို့မကျေနပ်တာကို လူတွေသိအောင်ပေါ်တင်ပြောရဲတဲ့သတ္တိလေ ကိုပေက မရိုင်းပါဘူး …………
တားတားဆို အနီအပြင် ကြယ်တစ်ပွင့်ပါ ပျောက်တွားတယ်ဂျာ..
ကျန်တဲ့ တစ်ပွင့်ပါ ဖျောက်လို့ မရလို့ 
ရရင် ဖျောက်ပေးဦးမှာ မြင်ယောင်သေး..
အယ် …. အူးအူးဗိုက်က ကြယ်တစ်ပွင့်ပဲရှိတော့တယ်တော့ ……. ဟုတ်ပ အဲဒါဘယ်လိုကြောင့် လဲကွယ် …..
အဲဒါ တော့ စီးကလက် လေ
ဘူမှ ပြန်မပြောနဲ့ 
သူ့ ကြယ် ကို ပေါင်ထားတာ
အသေးစိတ် ကို ဇရပ်ထဲမှာ သွားကြည့်
ကိုပေ စီးကလက်ကိုနည်းနည်းလောက်တို့ပါရစေနော် …….. ဇရပ်ဆိုတာ ဘယ်နေရာလဲဟင် …… သူများအကြောင်းဆို သိပ်စပ်စုချင်လွန်းလို့ပါ …….
သူရို့ ဘဲ ဇရပ်မှာ လေတိုက်လို့ အေးသလေး ဘာလေးနဲ့ ချမ်းခဲ့ကြပြီး
မခိုင်ရေ … အဲ့ဒီလို လိုက်လိုက်နီနေတာ ကြာပြီပေါ့ … အထူးသဖြင့် ပို့စ်အဟောင်းတွေမှာ … မခိုင်ကအခုမှ အထူးဆန်းလုပ်လို့ … ။ သိပ်ပြီး ဖီးလ်မဖြစ်ပါနဲ့ …. မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်သာ သဘောထားလိုက်ပါ ။
အနီတွေ အစိမ်းတွေရဲ့အရည်တွက် နည်းတာ များတာဘာထိခိုက်မှု၊ သက်ရောက်မှုမှ မရှိဘူးတဲ့သဂျီးပြောဖူးတာပဲ … ။ ကိုယ်သဘောကျတဲ့ ကော့မန့်မျိုး ၊ ကိုယ်နဲ့ အနီးစပ်ဆုံးကော့မန့်မျိုးကို အစိမ်းပေးမယ် ။ မကြိုက်တဲ့ ကော့မန့် သဘောထားကွဲလွဲတဲက ကော့မန့်မျိုး နဲ့ ဆဲထားတာတွေ ၊ ညစ်တီးညစ်ပတ်ရေးထားတာတွေဆို ကန့် ကွက်တဲ့ သဘောနဲ့ အနီပေးတယ်လို့.. အရင်က ယုံကြည်ခဲ့ပေမယ့် … ။ အခုတော့ အကောင်းရေးလည်း နီတာပဲ … ရည်ရွယ်ချက် ရှိရှိနဲ့ကို … သက်သက် စိတ်အနှောက်ယှက်ပေးနေပုံပဲ … ။ မခိုင်ပို့စ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး တခြားပို့စ်တွေလည်း ဒီအတိုင်းပဲ … ။
ဒီတော့မခိုင်ရာ … စိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်အောင် သက်သက်လိုက်လုပ်နေတဲ့ နောက်ကွယ်လူတွေ ရည်ရွယ်ချက်မပြည့်ရလေအောင် … ဒီကိစ္စ ခေါင်းထဲကို ထည့်မနေနဲ့တော့ … ။ ဘာမှ အရေးမပါဘူး … ။
ညီမကတော့ နီချင်နီ ၊ စိမ်းချင်စိမ်း လုံးဝ don’t care ပဲ
အမကစိတ်အနှောင့်အယှက်သိပ်မဖြစ်ပါဘူးကွယ် ……. ဒါပေသည့် စာကောင်းပေကောင်းလေးတွေရေးသူတွေ ဓာတ်ပုံကောင်းလေးတွေကို ကြိုးစားပမ်းစား ရိုက်ပြီး တင်နေသူတွေ စိတ်ထဲမှာတော့ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နေတယ်ကွယ် သူတို့စိတ်မကြည်တော့ အမတို့ပရိတ်သတ်တွေက စာပေကောင်းပုံကောင်းတွေကို မဖတ်ရမကြည့်ရတော့ဘူးပေ့ါ ……
ဟုတ်ပါ့ ma etone ရာ…ခုနောက်ပိုင်းမှာ Comment တွေကိုမှားတယ်/မှန်တယ် ဖြစ်သင့်တယ်/မဖြစ်သင့်တယ် လိုတောင်မစဉ်းစားတော့ပဲ ပလိန်းချည်းကိုလိုက်နီနေတဲ့သူရှိလိမ့်မယ်…..တစ်ချို့ပြန်ထောက်ပြထားတဲ့ Comment တွေဆို အရမ်းကောင်းတယ်ဆိုတာ ဖက်တဲ့သူတိုင်းသိပေမဲ့ ….. ကြည့်လိုက်ရင် နီနေတာပဲ…အကောင်းဆုံးကတော့ အမပြောသလို Don’t Care ဘဲ
( ဟော …… ပြောရင်းနီလာဘီတွေ့လား….. )
နီတာဖြစ်ဖြစ်…စိမ်းတာဖြစ်ဖြစ်.. သူတဦးက..သူတဦးအပေါ်..စိတ်ဝင်စားမှုကိုပြတာလို့… ယူဆပါတယ်..
နီပေးတာ..စိမ်းလိုက်တာက.. စာဖတ်သူရဲ့.. ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးပါ..
တို့ သူကြီး (ကြီး) ကတော့ ပျော်ပျော်ဘဲ။
ဟော သူကြီးကိုနီသွားပြီ မြန်တာ ……. သူကြီးရေ နီတာစိမ်းတာက သက်ရောက်မှုမရှိဘူးဆိုပေ သည့် အခုတော့ ကိုဗိုက်ကလေးရဲ့ကြယ်ပြုတ်သွားတယ် အဲဒါဘာပြုလို့လဲသိဘူးနော် …..
အပေါ်က သဂျီး ကို နီတာ တားတားပါခည …
ကာရခန် ၀ဇီခန် မူနာ့ခ်ျခန် မြောက် နီသွားတဲ့
မိဂီ ညည်းတို့က ဂ နိုင်ငံမှာနေပြီး ကွန်ကောင်းတော့ လုပ်ချင်းတိုင်းလုပ်နေတာလား ….. ညည်း လည်းကြယ်သုံးပွင့် ငါလိုက်နီလိုက်ရင် ကြယ်တွေကြွေကုန်မယ် ဘာမှတ်လဲ ………. အဟီးးးး ဒါဆို ကာယကံမြောက်တာပေ့ါနော် ……. နီမယ်လို့စိတ်ကတွေးတာကို လက်ကလုပ်ရင် ကာယကံ ၀စီကံ (၂) ကံ ……..
အြော်…………..ဒါ့ကြောင့် ဒီမို သဂျီးးးးးးးးးးးးး
မေဖလားဝါးရယ် စိတ်ထဲထားပါဘူးကွယ် ….. အခုကလည်း အပေါ်မှာပြောသလို တစ်ခြား ခံစားနေရသူတွေအတွက်ပါ သူတို့က စာကောင်းလေးတွေတင်ချင်တာတောင် လက်တွန့်နေတော့မှာ ဒါဆိုဘယ်သူတွေထိခိုက်မလဲ ဒီဆိုဒ်ကိုဖတ်နေတဲ့သူတွေ မန်ဘာဝင်သူတွေ စာပေကောင်းတွေမဖတ်ရတော့ဘူးပေ့ါ ….. ဒီလိုနဲ့ဒီဆိုဒ်ကိုလူတစ်ခြားလူတွေ က အလကားဆိုဒ်ကြီးပါ မ၀င်တော့ဘူး စာတွေဖတ်ရတာလည်း အနှစ်သာရမရှိဘူး ဒီလိုဆို ကျွန်မတို့ရွာကြီးစိမ်းလန်းစိုပြေမှုမရှိတော့ဘူး ဒါလေးကိုတွေးမိပြီးပို့စ်တင်လိုက်တာပါ …….
ဒါပေမဲ့ လဲ သူ့ဟာသူ လက်ညောင်းခံ ပြီး နီရတာ ကို သာ ဂရုဏာထားပြီး ဥပက္ခာပွါး လိုက်ပါတော့။
တကယ်တော့ သမီးပြောသလို ပါဘဲ။
သူ့မှာ အနီ နှိပ်တာ ပျော်လို့ မဟုတ်တာ သေချာတယ်။
သူ့စိတ်မှာ ဒေါသ တွေ ရှိနေလို့ များမယ်။
အရီးလတ် ကျေးဇူးပါ သမီးပို့စ်တွေမှာ အရီးလတ်ရဲ့ကော်မန့်လေးတွေကိုအမြဲတွေ့နေရလို့ပါ ….
သမီးပြောချင်တာက ကိုယ်မကျေနပ်တာရှိရင် မနီပဲ မကျေနပ်တာကို ပေါ်တင်ရေးလိုက်ရင် သူကြီးဆီကနေ ၁၀ မှတ်လည်းရပါတယ် ကော်မန့်ပေးသူရော ပို့စ်တင်သူရောက သူ့အမှားတွေကိုသိပြီး ပြင်သင့်တာကို ပြင်လို့ရတာပေ့ါ ….. စာဖတ်သူများအနေနဲ့လုပ်မိရင်လည်း အဲသလိုမလုပ်ပဲ ပြောချင်တာကို မန်ဘာဝင်ပြီး လွတ်လပ်စွာပြောဆိုဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ် အပေါ်ကသူကြီးကော်မန့်မှာ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုတာကို ခွင့်ပြုထားပါတယ် ………
ဟုတ်တယ်ဗျ …စာဖတ်သူအခွင့်အရေး နဲ့ ..
ခင်ဗျားသည်ပိုစ့် ကို မကြိုက်ဘူးဗျ..
ဆန့်လည်း ဆန့်ကျင်တယ် ..
ပိုစ့် ပါ အဓိက အကြောင်းအရာ က တော့ ဝေဖန်စရာ မရှိပေမယ့်..
ဘာကြောင့် ဆန့်ကျင်လဲ ရှုံ့ချလဲ ချဉ်လဲ မေးရင် ဖြေပါ့မယ်..
ဇဂါးမစပ် လက်မတချောင်း အောက်စိုက်ခဲ့ပီး ပိုစ့်ပိုင်ရှင်ရေးတဲ့ကောမန့်များကို
အင့် ဟယ်. .အင့် ဟယ်..
အမလေးပြောရင်းနဲ့ကိုနီနေပါ့လား ……. ကျွဲပါးစောင်းတီး အသိခေါက်ခက်အ၀င်နက် နွားပလာတာကျွေးသလို ဘယ်လိုပြောပြောနားမလည်ပါလားနော် …….. ကိုဂီရေ “ကြွားလို့” ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုတာသိတယ်နော် ….. ကြွားစရာရှိတုန်းလေးကြွားရတာ ကြွားချိန်ရတုန်း လေးကြွားရတာ တစ်ချိန်သူထားခဲ့ရင် ကိုယ့်မှာဘယ်သူ့ကိုခေါ်ကြွားရမလဲ ပြီးတော့အခုကိုဂီ ရေးသလိုပေါ်တင် မကြိုက်ဘူးရေးနိုင်ပါတယ် …… ကောင်မဂီ နင် ဂငယ် နိုင်ငံမှာနေတုန်းလုပ်ထားဦးပေ့ါအေ ….. နင်ပြန်လာမှ ခွေးအကြီးလှည်းနင်းသလို မြန်မာနိုင်ငံကွန်မကောင်းတာကိုပြောတာ ငါနားထောင်ဦးမယ် …….. ငါလည်းအရသာရှိထှာ ကတ်ကတ်လန်အောင် ညည်းကိုပြောရလို့ ………
အိုက်ဒလို ကြွားလည်း ကြွားသေး ကတ်ကတ်လည်း လန်သေး ..
အဲ့ဒါကြောင့်ကို ညည်းရဲ့ ခွန်နရာ့ ခြောက်ခုမြောက် ကွန်းမန့်ဂျီးကို
ဟောသလို ဂျီး ကို အားပါးတရ နီ ပစ်ခဲ့ဂျောင်း…
“နီပေးတာ..စိမ်းလိုက်တာက.. စာဖတ်သူရဲ့.. ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးပါ..
စာရေးသူရဲ့ စိတ်ကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်
မနို ကိုယ်တိုင်းလဲ ဒီလိုပဲ ခံစားခဲ့ရပါတယ်
ဒီနေ့အထိ ဘယ်သူကိုမှ အနီမပေးခဲ့ပါဘူး
မနီသင့်ပဲနီနေတာတွေ့ရင် ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်ပေမဲ့ စိမ်းပေးခဲ့ပါသေးတယ်
“ကောင်းမွန်စွာရေးသားထားခြင်းကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာအမြင်မကြည်မှုနဲ့ အနီပေးရန်မသင့်ကြောင်း ထိုသို့လုပ်နေပါက ရွာသူရွာသားစာရေးစရာကောင်းများကို အနုနည်းနဲ့တိုက်ခိုက်နေသလိုဖြစ်ပြီး စာရေးဆရာကောင်းများဆုံးရှုံးနိုင်ကြောင်း”
မနိုရေ ထောက်ခံရေးသားတာကျေးဇူးပါ ….. ညီမထပ်ပြောချင်တာက ဥပမာ – ညီမပို့စ်တစ်ခု တင်လို့မကျေနပ်ရင် ပေါ်တင်ဝင်ရေးပါ ….. ဘာတွေတင်ထားတာလဲ ဖတ်ရတာမျက်စေ့ညောင်း တယ် ပုံတွေတင်တာလှလည်းမလှဘူး စကားတွေကလည်းအပိုတွေပြောထားတယ် …. စာတွေက စာလုံးပေါင်းတွေမှားနေတယ် ဘာဗဟုသုတမှလည်းမရဘူး နောက်ဆို ဗဟုသုတရတာ တွေတင်ပေးပါ ….. ဒါဆိုကာယကံရှင်ကစိတ်မဆိုးပဲ သူ့ရဲ့ရင်ထဲကအမှန်ပြောတာကို သဘောထားကြီးစွာနဲ့ ဟုတ်ကဲ့ပါ နောက်ဆိုစာကောင်းပေကောင်းဓာတ်ပုံကောင်းတွေရအောင် ကြိုးစားပါ့မယ့်လို့ ပြန်ရေးပေးပါ့မယ် ……. နီနေကြသူများ အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် မနီပဲ ရင်ထဲရှိတာကို ထုတ်ဖော်ပြောစေချင်ပါတယ် …. အုံပုန်းဘ၀ကလည်း လွတ်မြောက်စေချင်တဲ့ သဘောပါ အေသင်ချိုဆွေသီချင်းထဲကလို တစ်ယောက်တည်းကျိန်မခံစားစေချင်ပါဘူး ……..
အဲဒီနီတာ စိမ်းတာက ခဏခဏ ပြဿနာတက်တယ်ဗျ
ဟောကြည့်…… နီပြီ ….. နီ..ပြီ………..နီ…..ပြီ……………နီ………….ပြီ……………..နီ………………ပြီ ……………………….နီ………………………………………………ပြီ ………………….
အော် ကိုထွန်းဝင်းလတ်နဲ့ အင်ဇာဂီ လူကသာ ယောက်ျားတွေဖြစ်တာ မနာလိုစိတ်က တော်တော် လေးကိုများသားနော် ……. ဒီမယ်ကိုထွန်းဝင်းလတ် ကိုယ့်ရှိတာကိုယ်ကြွားတာ ဘာပြုလဲ မကျေ နပ်ရင် သူများလိုကြွားနိုင်အောင် ကြိုးစား ဒါပဲ …….
မကြာခင် နှင်းဆီပန်းခင်းဂျီးဖစ်တော့ မှာ မြင်ယောင်သေး..
၇ွာသားများ တခါတခါ ဘာသာေ၇းကိစ္စ လူမျိုးေ၇းကိစ္စနဲ့ ၇န်ဖြစ်နေတာတွေလဲတွေ့နေ၇ပါတယ် တချို့ကမဖတ်ချင်ပေမယ့်လို့ တချို့ ကလဲဒါတွေကိုဖတ်ချင်ကြတယ်
ဒဏ်ရာဆိုတာ သူရဲကောင်းတို့အတွက် ဆုတံဆိပ်တွေတဲ့။
အနီ ဆိုတာ မန်းဂဇက်က စာရေးသူတွေအတွက် ဆုတံဆိပ်တွေပါပဲ။
အနီပေးနေတဲ့ လူတွေက အသိအမှတ်ပြုခဲ့ရင် ဆုတံဆိပ် ချီးမြှင့်သလိုကို ခံစားရပါတယ်။
ကဲပေးကြပေတော့ ဆုတံဆိပ်တွေ။… ဟီး…။
ဟုတ်တယ် လေးဘလက် အခုဆိုကြည့် မိဂီက သမီးကို ဆုတံဆိပ်တွေ အများကြီးပေးတယ် ဟော ပြီးတော့သူက သမီးရဲ့ကော်မန့်အရေအတွကိုလည်း စိတ်ဝင်တစားကြည့်သေးတယ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ထင်ပေါ်တာပေ့ါလေ …… အဟီး ပေးလိုက်စမ်း အနီ မိဂီညည်းအပေးလည်း နာ့ကိုပေး မယ့်သူတွေ ချိတယ် ညည်းကိုတောင် ဘယ်သူတွေပေးနေလဲသိဝူး ………
အနီပေးချက်ကတော့ ကမ်းကုန်ပဲ ။
အဘ လည်း ဒီ Post က ၊
ဂီဂီ နှင့် ခိုင်ခိုင် ပြောနေကြတာကိုဖတ်ပြီး ၊
နောက်တဲ့ အနေ နှင့် အနီလိုက်ပေးဦးမှ ဆိုပြီး ၊
သူကြီး Comment ကနေစပြီး အနီ စပေးလိုက်တာ ၊
အနီ တစ်ခု နှစ်ခုပဲ ပေးရသေးတယ် ၊
ပြန်လှည့်ကြည့်တော့ တခင်းလုံး နီနေပြီ ၊
လွတ်တဲ့ နေရာတောင် မရှိတော့ဘူး ။
ဟီိဟိ ၊ အဘ Comment လဲ စက္ကန့်ပိုင်း အတွင်း နီသွားမှာ ။
ဘာပဲပြောပြော သမီး ခိုင်ခိုင် ရဲ့ ဒီ Post ကို ၊
ဦးဗိုက် ကြယ်တစ်လုံး ပြုတ်ရခြင်း အကြောင်းရင်းကတော့ ၊
” နစ်ကီလီ ” နှင့် တွေ့သွားလို့တဲ့ ၊
” နစ်ကီလီ ” က ဦးဗိုက် ရဲ့ Performance ကို မကြိုက်လို့တဲ့ ၊
ကြယ်တစ်လုံး ဖြုတ်သွားတယ် ကြားတာပဲ ။ ဟီဟိ ။
Post တွေထဲမှာ ဖတ်ရသလောက်
ကြယ်ပေးခွင့် အာဏာရှိတာ သူတစ်ယောက်ပဲ ရှိတာကိုး ။
” အ​မျိုး​သား​​ ​၅၀၀၀​ ​ကျော်​နှင့်​​ ​အ​တူ​ အိပ်​ခဲ့​ဖူး​သည့်​ ​ဗြိ​တိန်​ အ​မျိုး​သ​မီး ”
အဘဖောရေ အခုလို ကြယ်ကိစ္စရှင်းပြပေးတာကျေးဇူးပါနော် ……. အဲအနီပေးတဲ့သူ ၂ ယောက်တော့ပေါ် ပြီ မိဂီရဲ့ကော်မန့်ကိုဘယ်သူနီနေလဲပေ့ါ ….. လက်စသတ်တော့အဘကို အဘကိုရော ဘယ်သူနီ သလဲမသိဘူးနော် …… စဉ်းစားနိုင်ရင်ပြောကွယ် စဉ်းစားနိုင်ရင်ပြောကွယ် …… ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အခုပို့စ်လေးတင်တော့မှ လူချစ်လူခင်ပေါတာ ကိုယ့်ကိုကိုယ့်သဘောပေါက်တော့တယ် … အဘရေ သမီးကိုမိန်းမချင်းမနာလိုတာမပြောလိုပါဘူး ယောက်ျားတွေဖြစ်ပြီးမနာလိုတဲ့လူတွေ စိတ်ထား ပုတ်ပြီးလိုက်နီနေတဲ့သူတွေရှိတာကိုလည်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးသိလိုက်ရကြောင်းပါ ………
အဲဒီကြယ်တွေ.. အနီတွေက.. ဒေတာဗေ့စ်ထဲ..မထားပါဘူး..
ဆိုတော့.. ဘာမှတ်တမ်းမှမရှိ.. စာဖတ်သူ/ေ၇းသူကို.. ဆွဲဆောင်တဲ့.. သဘောပါပဲ..
အလကားနေ.. လိုက်လုပ်နေသူကို… ရွာသူားအများစုက.. ဥပေက္ခာမထားနိုင်ရင်.. အဲဒီစနစ်တခုလုံးဖြုတ်လိုက်လို့တော့ရမယ်..
အနီပေးနေသူတွေက.. အဲဒါမရှိတော့တာ.. ကြိုက်သလား.. ဖြေကြည့်ပါနော..။
သကြီးရေ အခုလို နီတာက ဘာအကျိုးသက်ရောက်မှုမှမရှိဘူးဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးသိ လိုက်ရတော့ အနီပေးချင်သူတွေကြိုက်သလောက်ပေးပါစေတော့ အရေးကိုမစိုက်တော့ပါဘူး အိတုံပြောသလို ပို့စ်ကိုအရောင်ခြယ်သူတွေလို့ပဲသတ်မှတ်ပြီး ပျော်ပျော်ကြီးလက်ခံပါ တော့မယ်နော် ……… ဒီနေ့ဟာတစ်ကယ်ပျော်ပါတယ် ရင်ထဲသိချင်တာတွေကို ရှင်းရှင်းလင်း လင်းသိလိုက်ရလို့ပါ ……. အားဆေးတခွက်ထက် တန်ဖိုးရှိတဲ့ ဒီပို့စ်လေးကို အခိုင့်ရင်ထဲ အမြဲအမှတ်တရ သိမ်းထားဖြစ်မှာပါ သူကြီးခိုင်ရယ် ………
အယ် မခိုင်ရေ ပြောနေတုန်းပဲ
ဘယ်သူတွေများ ဝင်အားပေးသွားလဲ မသိဘူး အလကားသက်သက် ပိုစ့် တစ်ခုလုံး နီနေပြန်ပါရောလား ..
စိမ်းလို့ ရသမျှ ပြန်စီမ်းပေးခဲ့ပါတယ်နော် ……….
နွယ်ဘင်ရေ အပင်ပန်းခံလိုက်မစိမ်းပါနဲ့တော့ သူကြီးကပြောနေတယ် နီတာစိမ်းတာဘာမှ အရေး မပါဘူးတဲ့ ဒါဆိုစာရေးကောင်းတဲ့စာရေးဆရာတွေ ဓါပုံဆရာတွေ ဆက်ပြီး အားရပါးရတင်ကြပါ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ခဲရောင် (0) ဖြစ်နေမယ့်အစား အနီအစိမ်းလေး(+1 )( -1)တွေရှိနေတော့ ပို့စ်ကိုအရောင် ခြယ်သလိုဖြစ်တာပေ့ါ …… အခုဆို အမပို့စ်က သိပ်ကိုလှသွားတယ် ……
အနီရောင်ဆေးခြယ်တဲ့ နှင်းဆီ နှင်းဆီ မြင်သူတကာတိုင်းငေး လူတိုင်းကခူးချင်တဲ့ နှင်းဆီ နှင်းဆီ နံမည်ဒီပန်းကလေး ……… ဒီသီချင်းက နီနီဝင်းရွှေဆိုတဲ့လေသံအတိုင်းအမခိုင်ကပြန်ဆိုတာနော် .. ဇော်ဝင်းရှိန်မဟုတ်ဘူး ………
ဟေ့ ကိုယ်ဖာသာကိုယ်နီချင်နီကြ သများနံမယ်မပါနဲ့ နော် ဟင်း။ နှင်းဆီဆူးလည်း သွေးထွက်ရင် နီတက်တယ်။ နှင်းဆီဆူးရင် နီမယ်နော်။ သများတို့ က နီတာ ကိုကြိုက်လို့ နှင်းဆီလို့ ကိုပေးထားတာ မှတ်ကရော။ အင်းဟယ် အင်းဟယ် …………….. သွေးတွေနဲ့ နီနေပြီတွေ့လား
အံမယ်လေးတော် …….. နှင်းဆီဆူးကြီးနဲ့တော့ ထိုးပါနဲ့အေ နဂိုကမှနီနေတာတော်ကြာ နာ့ပို့စ် တစ်ခုလုံးသွေးရောင်လွှမ်းသွားပါဦးမယ် …..
မစိမ်းပါနဲ့ဗျို့ နီတာလေးကို သဘောကျတာ နီကြပါ နီကြပါ
အယ် … မမခိုင်ရေ နှင်းဆီနီတွေပွင့်နေပါ့လား
အပေါ်က သဂျီးကို နီသွားတာ မိုးစက်မဟုတ်ဘူးနော့
အော်ညီမရယ် သူများတွေဆို အနီရောင်နှင်းဆီကိုလိုချင်လို့ အပင်ပန်းခံစိုက်ရတယ် အမကတော့ ပို့စ်လေးတင်တာနဲ့နှင်းဆီနီတွေ အများကြီးရတယ် သူကြီးဆီက (၃၀) လဲရ ကော်မန့်တွေကြောင့် ပျော်ရ ညီမကိုတောင် (၂) ပွင့်ပေးထားတယ် ဘယ်သူလဲတော့မသိဘူး ………
မိုးစက်က တစ်ပွင့်တည်းတောင်းတာ နှစ်ပွင့်တောင်ပေးတယ်
နောက်တာပါ မမခိုင်ရယ် ..
အရင်တစ်ခေါက်ကလည်း လေးပေါက်ပို့စ်တင်ဖူးတယ် ဒီအကြောင်းကို
အဲတုန်းကလည်း အခုလိုပဲ အဲဒါကြောင့် ဘာမှစိတ်ထဲမထားနဲ့ ..
ဟိဟိ ကျုပ်ပါဗျို့ အကုန်လိုက်နီမယ်
သူများလို စိမ်းခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော် နီခိုင်းတာ ဟီဟိ
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ချစ်စရာ အချစ်တို့၏ဆရာ ချစ်ရာ ကျွန်တော် ချစ်စ/ဆရာ ထောက်ခံပါတယ်
ဒီရွာထဲမိုက်ရိုင်းတာကတော့ တစ်ယောက်ဘဲရှိပါတယ် ကိုဘုန်းကျော်ကြီးမဟုတ်ပါဘူး
ကိုဘုန်းကျော်ကြီးဆိုရင်တော့ ကန့်ကွက်ပါတယ် တကယ်မိုက်ရိုင်းတာက
ထန်းရည်ထည့်သောက်တဲ့ မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု ဆိုတဲ့ အဆင့်တန်းမရှိတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် http://myanmargazette.net/70377/creative-writing အဲ့သည်နေရာမှာ
ရဲရဲဝန့်ဝန့်ပြောင်ပြောင်မြောက်မြောက် စွန့်စွန့်စားစား သတ္တိရှိရှိ မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ပြီး
အနီရောင် နှုတ်ခမ်းလေးနဲ့ အာ…ဘွား ဆိုပြီး
အော် ရုပ်ရှင်တောင် ရှိသေး
ပျော်ပျော်ပါးပါး ကြီး နီပွဲကြီးကျင်းပကြတာပေါ့နော့…။
လေးဘလက်ကြီးရေ မတွေ့တာကြာလို့သတိရတယ်ဗျို့…….တွေ့ဖြစ်တဲ့အချိန်ကြရင် အာဘွားပေးမယ်ဗျို့…..ဟိဟိ
အိုဘယ့် ဒဿ အနော့ကို နီတာ ဘူဒဲ့လဲ အနော့ကိုနီတာအဒူတဲ့လဲ
ငါအပြားဂျီးပေါ်က နီလို့ မရလို့ ကံကောင်းသွားတာ
တတ်နိုင်ရင် best comment ဂျီးကို နီချင်ထှာ အေ
ပို့စ်ပိုင်ရှင် ကြွားစိန် ကိုတော့ ၂၁လက်မ ဒက်စတွတ်ပေါ်ရောက်တာနဲ့
အနီကတ် ခပ်ကြီးကြီး ပြမယ်အေ
ကိုဂီရေ. ငါအပြားကြီးပေါ်ကနေနီလို့ မရဘူးနော်။
တခါက အနီပေးလို့ ဆဲမိတာ နောင်တရ၍မဆုံးပါ
1.99 $ ယန်း နဲ့ ဆို ၁၇၀ ပေးရတဲ့ (ဗမာငွေ ၂၀၀၀မပြည့်တဲ့)
MyBrowser ကနေ မန့်လိုက်တာ ဗျို့ ..အဲ့ဒါ …
မိုးကုတ် ဘရောက်ဇာ က မြန်မာလို ရေးတဲ့ ဖူးဗားရှင်း ၀ယ်ပေမယ့်(ဈေးတူတူ)
အဆင်မပြေဘူးဗျ … ဖတ်မရတာတွေ ထွက်တယ်..
သူ့ အားနည်းချက်က မာလ်တီ တက်ဘ် ဖွင့်မရတာပဲ …
မန့် နိုင်တယ် ဆိုတော့ မဆိုးပါဘူးဗျာ ..
ဒါမှမဟုတ်လည်း အလကား ရတဲ့ ဇော်ဂျီ နုတ်ပက်နဲ့ အဆင်ပြေရဲ့
အန်းဒွိုက် မှာ ဆိုရင်တော့ mmbrowser ပေါ့ …
ဖူးဗားရှင်း တော့ ကျနော့်မှာ မရှိဘူးဗျ… ရေးလို့မရ ဘူး ဆိုပါတော့…
ခုတလော ပေါက်ပန်းလေးဆယ်ရေးနေတယ် ဆိုတာ ခေါင်းခြောက်လို့ဗျာ…
ငါအပြားကြီးပေါ်က နယူးစတင်းန် မှာ အလကား ရတဲ့
အီတာလီယာ ဖိုတို မဂ္ဂဇင်းအဟောင်း တွေ အဘိဒန် ကိုင် ဖတ်ပီး
ခေါင်းပူ လို့ … အပျော်တွေ လျောက်ရေးနေတာ ဖြစ်ပါကြောင်း…
အခု ထောင်ဖောက်ဖို့ ကြံနေပါတယ်..
မူဗီ သွင်းလို့မရလို့ပါ … နည်းနည်း မဟုတ်
များများ တင်းတယ် အဲ့ကိစ္စတော့..
လီဂယ် ဖြစ်တယ် တဲ့ …သဂျီးရဲ့ …. ပန်းသီး မကောင်းဘူး ဘယ်သူပြောတုန်း..
ပန်းသီး ပေးထားတဲ့အတိုင်း မသုံးဘဲ ပန်းသီးကို ဘတ်သီး ရိုက်နိုင်ရင် ….
ရေလည် စမတ်ဖြစ်ပီ …
အပျော့ကိုလည်း ပစ်မထား နိုင်ပါဘူး လေ…
အပျော့ လက်ပကျွတ်ပေါ်က ခွီအေးတစ် ဆု ကို တပြားမှ မကုန်ဘဲ
တာ့ခ်ျ ဗားရှင်း ရတဲ့ နည်း ရှာတွေ့ သွားတော့သကိုး ….
စကင်းတုန်း ကိုင်ရတာများ …တယ်သွက် ..တပုံ ၁၅မိနစ်ပဲ …
အဲ့ … ကျနော် အဒိုဘီ တာ့ခ်ျ (ယန်း၈၅၀တန်) နဲ့
စနပ်ဆိ(၄၅၀)တန် … (အပ္ပလီကေးရှင်း အော့ဖ်သည်ရီးယား)
နဲ့ တို့နေတယ် အခု. ….
ဒီဇိုင်း အတွက်ကတော့ အော်တိုကတ် က ထုတ်တဲ့ စကတ်ခ်ျဘုတ်ပရို(၄၅၀ပဲ)
ကို အပျင်းပြေ တို့နေရဲ့ဗျာ ….
မန်းဂ အနီမီ စီဂျီ အဲ့ဘက် နည်းနည်း သွားမလားလို့ ….
(သဂျီးပုံ ကာရီကေချာ ၆လအတွင်း လာမည် …မျှော်….)
တတ်နိုက်လွန်းတဲ့ အနှိုင်းမဲ့ ဂီဂီ
လူအချင်းချင်း လှည့်ပတ်ချင်း ကင်းရှင်းကြပါစေ ….
မနာလိုချင်း အချင်းချင်း ကင်းရှင်းကြပါစေ ……….
ဟဲ့မိဂီ ညည်းနှယ်အေ မနာလိုစိတ်ကတော်တော်များတာပဲ ဘောက်မဲ့ကြောင့် ဒီလောက်မနာလိုဖြစ်နေတာတုန်း ……. နာ့ကိုများကြွားစိန်တဲ့ နာသက်မဲ့ပစ္စည်းတွေတစ်ခုမှ ထည့်ကြွားထားတာမပါဘူးနော် …. သူများလို ပန်းသီးတစ်ခြမ်းပဲ့ကိုင်တာတို့ ကင်နွမ်ဝယ်တာတို့ အိုင်ကိုပက်တယ်ဆိုလား အိုင်ကိုဖုံးနေတယ်ဆိုလား အဲဒါတွေမပါဝူးနော် …. နာတကယ်ကြွားရင် ညည်းထိုင်ငိုသွားရမယ် ……. ဖေ့ဘုတ်မှာကြည့်နေ နင့်ကိုသက်သက်ကိုကြွားပြအုံးမယ် …..
နီဒဲ့အချိန်မာ မနောကံထိုက်တယ်ဆိုတော့ စိမ်းတဲ့ချိန်မာ ရောမနောကံမထိုက်ဘူးလား
နီဒါကို မကြိုက်ဘူးလို့နှလုံးသွင်းတော့ ( ဒေါသစိတ် )
စိမ်းဒါကို နှစ်သက်တော့ တဏှာ နေ………………………သံသရာထဲမှာ
@ အူးအူး ချစ်စ/ဆရာ အဟဲ …….. (၃)ယောက်လို့ပြောတဲ့အထဲမှာ့ အူးအူးပြောတဲ့ ကိုအောင်ပုပါတယ် …….. တစ်ခါတစ်လေပါ ဘာပြုလဲ သူရိုင်းတာ …….. သူကပေါ်တင်ရိုင်းတယ်လေ အိုက်ဒါမျိုးကို ကြိုက်တယ် …….. ကိုအောင်ပုက ညီမကိုတော့မရိုင်းဖူးပါဘူး ………
@ ကိုအောင်ပု မှန်တယ်ဗျို့ စိမ်းတာကိုနှစ်သက်တာ တဏှာ ……. နီတာကိုမကြိုက်တာ (ဒေါသစိတ်) ဒါမျိုးဆိုတော့လည်း မဆိုးပါဘူး ကိုအောင်ပုက ……..
ခိုင်ခိုင်ရေ .. အနီကျေူးဇူးနဲ့ ခိုင်ခိုင်လည်း သူကြီးဆီက အတော်ရလိုက်ပြီလေ.. :grin:
အနဲဆုံး အနီပေးဖို့ သူ့ခမျာ ကြိုးစားရရှာတာ .. အသိအမှတ်ပြုပေးလိုက်ပါ … အခုလိုရေးလေ ၀မ်းသာလေဖြစ်နေမှာလေ ..
.. ၀မ်းသာအောင် လေလည်ပြမနေကြပါနဲ့ဗျာ..
ဒီအနီအကြောင်းကို မှတ်မှတ်ရရ 31-21-2011 နေ့မှာ လက်သီးပုံးအနီဆိုပြီး ပိုစ်တောင်ရးတင်ဘူးပါတယ်
ဒါပေမယ် သူကြီးကိုယ်တိုင်က ဒီလို ပေါက်ကရပေးနေတဲ့အနီကို လက်ခံတယ်ဆိုမှတော့
ကြေးမုံဂျီးတို့အမျိုးဂဒေါ့ ကမ္ဘာမှာ တပ်နီဒေါ်ငပွဂျီး အမည်တွင်ဒယ်.။
@ကိုထူးဆန်းရေ သူတို့က၀မ်းသာနေတယ်ဆိုတော့လည်း ကိုယ်ကကုသိုလ်ထပ်ရတာပေ့ါလေ ….. လူတစ် ဦးစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာ နည်းတဲ့ကုသိုလ်လား ……..
@လေးပေါက် သမီးကတော့ ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားပြီ နီတော့ပိုကောင်းတာပေ့ါ …. အခုဆိုမနေ့ကလို နီတာတွေမရှိတော့သမီးပို့စ်ကမစိုပြေတော့ဘူး ……
@အူးကြောင်ကြီး ဖစ်နိုင်တယ် ………
လေလည်ပြရင် ၀မ်းသာတာ ဘာကောင်လဲ သိတယ်မဟုတ်လား ခိုင်ခိုင်ရဲ့ .. အဲ့ဒါလေးပါ။
အခု ခိုင်ခိုင်လည်း အဲ့ဒီလို ကုသိုလ်ထပ်ရတာပေါ့ စိတ်ထားနိုင်တော့လည်း စိတ်ချမ်းသာ သွားပြီမဟုတ်လား။ သူ့ ဒေါသ ကနေ ကိုယ့်ဒေါသ မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်….
နီနီ စိမ်းစိမ်း ပါဗျာ…အဓိကကတော့..ညနေစောင်းမှာ..
လေးမိုက်ကြီး ဘယ်ကဘယ်လို ကြီးနီဖြစ်သွားတာတုန်း ……..
လေးကြီးနီ အဲလေ လေးကြီးမိုက်ကြီး နေကောင်းပါတယ်နော်…… ဒီလို အနီပွဲလေးမှာလာရောက် အားပေးသွားလို့ ဆော်ကြည်ထီပေါက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါစေဗျာ….ဟိဟိ
Please let me fly by Bo Own Thee.
စွယ်တော်ရွက်လေးရေ ……… Bo Own Thee ဆိုတဲ့ စာသားလေးကို သိပ်သုံးတာပဲနော် …..
မြန်မာပြည်ကိုပြန်ရောက်နေပလားကွယ် စွယ်တော်ရွက်ကလေးက စိမ်းနေပါတယ်ကွယ် ……. အစိမ်းထဲမှာ စွယ်တော်ရွက်လေးစိမ်းနေတာအကြိုက်ဆုံးပဲ ……….
အမရေးတဲ့ ပိုစ့်ဟောင်းတွေလည်း နီနေတာပါပဲ ညီမရယ်။ ဘယ်လိုမှ သဘောမထားပါဘူး။
နီချင်နီ စိမ်းချင်စိမ်း ကြိုက်သလိုသာ ပေးကြပါစေ။
ခုတောင် ညီမလေးစာအောက်က ကွန်းမန့်တွေ ရဲနေပါရောလား။
အမကွန်းမန့်လည်း မကြာမှီ နီမည် မျှော် …